Jawaabta ugu fiican: Sida loo galo xarunta tababarka rugby? - Horyaalnimada
Sida loo helo rugby -ga?
Sidee loo dhexgaliyaa xarunta rajada rugby -ga?
Sidee loogu biiraa naadiga rugby?
Sidee loo noqdaa cayaaryahan rugby xirfad leh?
Sidee loo yeelan karaa jir dhiska ciyaarta rugby?
Waa maxay mushaharka ciyaartoyga rugby -ga?
Waa maxay mushaharka Romain Ntamack?
Sida loo mideeyo xarunta rajada kubbada cagta dumarka?
Sidee loo mideeyaa xarunta rajada kubbadda gacanta?
Sidee buu u shaqeeyaa naadiga rugby?
Intee da'da lagu bilaabayaa rugby?
Halkee lagu tababaraa rugby?
Waa maxay mushaharka ciyaaryahan xirfadle ah?
Waa maxay mushaharka Antoine Dupont?
Maxay ciyaartooyda rugby -gu dhego u leeyihiin?
Inta aad la xiriirto, xasuusnoow in aad mar walba garabkaaga dhigto dhinaca uu qofka kaa soo horjeeda ku soo wajahan yahay oo aad madaxa ka saartid miskaha ka baxsan. Meesha lugahaagu waxay saamaysaa awoodda wax-qabashadaada. Sida meelaynta wanaagsan ee gacmahaaga, waxay u oggolaanaysaa ciyaartoyga kaa horreeya inuu kaa baxsado.
Ciyaartoyga U16 ayaa lagu qiimeeyay inuu leeyahay awood xoogan ka dib wuxuu ku gudbaa imtixaanada jireed (idem U15) iyo wareysi dugsi oo gaar ah haddii uu rabo inuu ku biiro Pôle Espoir Rugby.
Diiwaangelinta naadiga rugby: shuruudaha iyo shuruudaha
Haddii kale, waxaad u baahan tahay inaad si toos ah u tagto dhismaha dhismaha. Si kastaba ha noqotee, ogow sida loo diiwaan geliyo marka hore ka hor intaadan ku biirin. Mabda 'ahaan, diiwaangelinta naadiga rugby-ga waxay shaqaynaysaa hal sano.
WAA XIISO BADAN: Jawaab degdeg ah: Sidee loo sameeyaa miiska tennis-ka?
Si aad u noqoto ciyaaryahan rugby ah oo xirfad leh waxaad u baahan tahay xirfado iyo tayo:
caafimaad buuxa ku qabo cayaaraha;
leeyihiin ballanqaad jireed;
leeyihiin qaab jidheed;
si fiican u yaqaanaan xeerarka dhexdhexaadinta;
leeyihiin aqoon aasaasi ah oo ku saabsan cuntada cuntada;
ogaadaan heerarka badbaadada cayaartooda.
Ku celcelinta jimicsiyada jirdhisidda waxay hubisaa in cayaaryahanka rugby-ga uu ku jiro qaab jireed heer sare ah. Si kastaba ha ahaatee, cunto wanaagsan ayaa u oggolaanaysa inuu ilaaliyo guulaha inta lagu jiro tababarka. Waxa kaliya ee loo baahan yahay waa hab-dhismeed la'aan iyo qaab-dhismeed dhinacan ah si loo diido dadaalka ciyaartoyga.
Soo koobid. Antoine Dupont, ciyaaryahanka ugu fiican aduunka 2021, ayaa heli doona mushaar sanadle ah oo dhan €600. Qandaraaska ilaa 000, wuxuu si buuxda ugala xaajoon doonaa kordhinta. Ka hel warka TOP 2023 ee Quinze Mondial.
Laga soo bilaabo maalintaas, iyo marka loo eego qiyaasta L'Equipe xagaagii hore, Romain Ntamack wuxuu keeni jiray ku dhawaad ​​36 euro bishii.
Helitaanka dumarka Pôles Espoirs waxay ku xiran tahay gudbinta tartanka. Tani waxay isu keentaa ciyaartoyga lagu aqoonsaday hawlgallada baadhista ee ay abaabuleen Degmooyinka, Ururada iyo FFF lafteeda.
Sidee loo geliyaa tiirka rajada kubbadda gacanta? Gabdhaha da'da yar ee ku dhashay 2006 ee barnaamijyada ku biirista ee France oo dhan oo aan loo dooran barnaamijka heer sare ee gobolkooda asal ahaan waxay codsan karaan inay ka qaybqaataan imtixaanada gelitaanka Pôle d'Excellence ee xilliga 2022/2023.
WAA XIISO BADAN: Jawaab degdeg ah: Goorma ayaa lagu soo laabanayaa ciyaaraha ka dib wadne qabad?
Naadiga rugby hiwaayadda waa urur ka shaqeeya mahadnaqa ka qaybgalka hoggaamiyeyaasha iskaa wax u qabso. Waxa ina keena waa qiyamka aynu ku xidhanahay ee aynu wadaagno, nooc kasta oo ciyaarahayaga asal ahaan ka soo jeedaan.
Laga bilaabo xilliga 2020-2021, qaybta 6 ka yar waa la kordhin doonaa. Laga bilaabo da'da 3, carruurtu waxay qaadan karaan shatiga FFR.
Soo hel naadiyada kuugu dhow, lagu sifeeyo ficil ahaan, tirada shatiga, jadwalka, tartamada oo baro wax badan oo ku saabsan kooxdaada mustaqbalka!
BRIGNOLES Provence XV.
RUGBY CLUB HYERES CARQUEIRANNE LA CRAU.
RUGBY CLUB DRAGUIGNAN.
Haddaba, celceliska mushaharka ciyaartoyga kubbadda cagta ee Ligue 1 waa 100 oo Yuuro bishii. Mushaar la’aanta PSG, taasoo carqaladaynaysa dhaqaalaha iyo xisaabinta kooxaha Faransiiska, celcelis ahaan waxay hoos ugu dhacdaa 000 oo Yuuro bishii.
Si fiican loo wargeliyay, Midi Olympique ayaa qeexday in Antoine Dupont, n ° 9 ee XV ee Faransiiska iyo garoonka Toulouse, uu heli doono 600 € guud ahaan sannadkii, ama ku dhawaad ​​​​000 € net. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaarka badan horyaalka 462-ka sare.
"Tani waxaa sabab u ah dhaawacyada soo noqnoqda ee dhegaha," ayuu yiri dhakhtarka isboortiga iyo maamulaha caafimaadka Stade Français, Alexis Savigny. "Iyadoo la eegayo qallafsanaan, oo la xidhiidha shoog, iyo cadaadis iyo khilaaf, oo la xidhiidha qashinka, hematomas ayaa samaysma."
WAA XIISO BADAN: Su'aasha inta badan la isweydiiyo: heerkulka jidhkaagu ma kor u kaca marka aad jimicsi samaynayso?
Jawaab degdeg ah: Sidee loo yareeyaa xanuunka lugta ka dib ciyaaraha?
Sidee loo joojiyo xanuunka lugaha ka dib jimicsiga? Kadib
Sidee loo joojiyaa xanuunka muruqa ka dib jimicsiga?
Maxay muruqyagu u dhaawacmaan ciyaaraha ka dib? xanuun ka dib jimicsiga
Sidee loo yareeyaa xanuunka ciyaaraha?
Sidee loo sameeyaa xanuunka si dhakhso ah u baaba'a? 5 tabo oo lagu nafiso xanuunka jidhka!
Sidee looga fogaadaa xanuunka ka dib isboortiga? 7 talo ee
Waa kuwee kanaalka Champions League?
Sidee loo joojiyo xanuunka ka dib isboortiga?
Sidee loo diiriyaa gacmahaaga ka hor inta aan la dhisin jirka?
Waa maxay kabaha kabaha lagu xidho dharka?
Jawaab degdeg ah: Halkee lagu qabtaa Ciyaaraha Olombikada qadiimiga ah?
Jawaabta ugu fiican: Goorma ayaa la ciyaarayaa Coupe de France?
Sideen ku helaa adeegga macaamiisha Foot Locker?